लेनिनको १५०औं जन्मोत्सवको सन्दर्भमा रूसमा माक्र्सवाद – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख १०
रसिया त्यस्तो देशहरूमध्ये एउटा थियो जहाँ माक्र्सवाद र माक्र्सवादी साहित्य धेरै पहिले सुरूमै फैलियो । वास्तवमा माक्र्सको सैद्धान्तिक कार्य ‘क्यापिटल ’ अथवा ’दास कयापिटल’को पहिलो अनुवाद रसियन भाषामा थियो । १८७२मा प्रकाशित एउटा संश्करण ( मुल जर्मन संश्करणको केबल ५ वर्षपछि), जो एउटा प्रशिद्ध जर्नलमा प्रकाशित गरिएको थियो, त्यो नै राम्रो बजार र अनगिन्ति सकारात्मक पुनरावलोकनको दृष्टिले ज्यादै सफल भयो । यसको प्रभाव यति ठूलो भयो कि १८७३–७४ आउदा नआउदै ‘पु‘जी’बाट सन्दर्भहरू रसियाका ठूलठूला शहरहरूमा क्रान्तिकारी विद्यार्थीका आन्दोलनहरूका प्रचारमा देखिन सूरू भइसकेका थिए । माक्र्सवादी कामका रसियन भाषाका अन्य अनुवादहरूलाई पनि रसियन क्रान्तिकारीहरूद्धारा निकै पहिले देखिनै माक्र्सवादप्रतिको आकर्षण बढाएको थियो । यस्ता क्रान्तिकारी मध्ये एक जना भेरा जासुलिक थिएन,जो एकजना महिला क्रान्तिकारी थिइन् र जो सेन्ट पिटस्वर्गको गभर्नरको हत्या गर्ने उनको प्रयासका लागि प्रशिद्ध थिइन् । उनले १८८१मा माक्र्ससित पत्राचार गर्न सुरू गरेकी थिइन् जसलाई उनले माक्र्सको मृत्युपछि पनि निरन्तरता दिइ रहिन । १८८३मा उनी पहिलो रसियन माक्र्सवादी संगठन–जर्ज प्लेखानोवद्धारा नेतृत्व गरिएको ‘लेबर समूहको मुक्ति’को हिस्सा बनिन । प्लेखानोवले १८८९मा भएको दोस्रो अन्तराष्ट्रियको कांग्रेसमा भाग लिएका थिए त्यहि उनले पहिलो पटक एङ्गेल्ससित भेट गरेका थिए । यो वैठक पछि प्लेखानोवले एङ्गेल्सबाट मार्गनिर्देशन लिने र नजिकको सम्वन्ध कायम राख्ने कामलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
सोही समयमा उनकी आमाले उनलाई विश्वविद्यालयमा पुनः भर्नाका लागि वारम्वार कोशिस गरिन । उनलाई तै पनि कजानमा फेरी पनि इन्कार गरियो । उनलाई विदेशमा गएर पढनका लागि एउटा राहादानी दिन पनि इन्कार गरियो । घेरै निवेदनहरूपछि, लेनिनलाई १८९०को अन्त्यमा एउटा वाह्य कानुन विद्यार्थीको रूपमा सेन्ट पिटस्वर्ग विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि स्विकार गरियो । उनी लैक्चर ल्कासमा उपस्थित हुने अनुमति नभइकनै परीक्षाका लागि सिधै बस्न सक्दथे । लेनिनले उनका पहिलेका कजानका साथी विद्यार्थीसितै उही समयमा नै उनको कोर्ष सिध्याउने निस्चित गरेका थिए । उनले त्यसकारण स्वअध्यनमा लागे र चारवर्से कोर्सलाई एक वर्षभित्रैमा पुरा गरेर देखाइ दिए । १८९१मा लिइएको परीक्षामा उनले सबै विषयहरूमा उच्चतम अंक प्राप्त गरेका थिए र एउटा प्रथम स्थानको डिग्री प्राप्त गरे । जनवरी १८९२मा उनलाई कानुनवेत्ताका रूपमा स्विकार गरियो र सामारा क्षेत्रीय अदालतमा उनले प्राक्टीस सुरू गरे ।
लेनिन यद्धपि उनको कानुन प्राक्टीसमा एकदमै कम इच्छा राख्दथे । सेन्ट पिट्सवर्गमा उनको परिक्षा दिंदै गर्दा उनले त्यहाँ माक्र्सवादी सम्पर्कहरू विकास गरेका थिए र माक्र्सवादी साहित्य प्राप्त गरेका थिए । सामारामा लेनिनले मजदुरहरू र अरूहरूका गैर कानुनी अध्ययन सर्कलहरूमा लेक्चरहरू दिनका लागि उनको समयको ठूलो हिस्सा खर्च गरेका थिए । सामाराको पहिलो माक्र्सवादी अध्यन सर्कल पनि उनले नै गठन गरेका थिए । सामारा नरोदनिकको एउटा केन्द्र थियो र लेनिनले उनको शक्ति र क्षेमता त्यो समयको नरोदनिक विचारसितको लडाइमा केन्द्रीत गर,े जो उदारवादतर्फ गतिशील भएको थियो । उनले, त्यही समयमा, १८७०का बहादुर, स्वार्थहिन, नरोदनिक क्रान्तिकारीहरूका लागि उनमा महान् आदर थियो जसमध्ये धेरै जना राजनीतिबाट रिटाएर पछि सामारामा वस्दै आएका थिए । लेनिन सधैभरी उनीहरूबाट उनीहरूका क्रान्तिकारी कामहरू, उनीहरूका गोप्यता सम्वन्धी तरिकाहरू र सोधपुछ र मुद्दाहरूका दौरान क्रान्तिकारीहरूका व्यवहारवारे सिक्न उत्सुक थिए । यो सामारा नै थियो, जहाँबाट लेनिनले उनको पहिलो लेखहरू लेख्न सुरू गरे , जसलाई अध्ययन सर्कलहरूबीचमा वितरण गरिएका थिए । उनले रसियन भाषामा कम्युनिष्ट घोषणापत्र पनि अनुवाद गरेका थिए । यसरी लेनिनका कार्यहरू र प्रभाव भोल्गा क्षेत्रका सामारा वाहेक अरू प्रान्तहरूमा फैलिन सुरू ग¥यो ।
.ख..लेनिन र नयाँ प्रकारको सर्वहारावर्गीय पार्टी
यसलाई इष्क्रा (जसको अर्थ नेपालीमा झिल्को हुन्छ), भनियो । यसको शिर्षक पेजमा १८२५को पहिलो रसियन पुँजीवादी क्रान्तिकारीहरूका शब्दहरू–झिल्कोले एउटा ज्वाला बाल्ने छ भन्नेलाई राखियो । इष्क्रा विभिन्न समयमा विभिन्न देशहरू–जर्मनी, इगलैण्ड र स्टिजरलैण्डमा छाप्ने काम भयो । यसलाई सिधै रसियामा कहिल्यै पठाइएन् बरू जवसम्म रसियाभित्र रहेको गोप्य इष्क्रा समितिमा तिनीहरू पुग्ने हुँदैनन्थे यसलाई एकदमै घुमाउरो बाटोहरू हुँदै पठाउने गरियो । वितरकहरूका लागि गुप्त पुलिसलाई छल्नु एउटा एकदमै कठिन काम थियो र यदि इष्क्राका गुप्तरूपले निकाशी पैठारी गर्नेहरू समातिए भने तिनीहरूलाई सिधै साइवेरियाको निर्वासनमा पठाइन्थ्यो । इष्क्रा मजदुर वर्ग प्रशिक्षण गर्नका लागि एउटा प्रमुख औजार थियो किनभने पत्रिकामा प्रकाशित लेखहरू पढेर विभिन्न अध्ययन सर्कलहरूमा लेकचर सहित कक्षा लिने गरिन्थ्यो । इष्क्रा एजेण्टहरूले गोप्य इष्क्रा लिफलेटसका रूपमा पनि वितरण गर्ने प्रत्येक अवसरहरूको उपयोग गर्ने गर्दथे । तिनीहरूलाइ केबल कारखानाहरूमा मात्रै वितरण गरिएन बरू गल्लीहरू, नाचघरहरू, फौजी व्यारेकहरू र हुलाकहरूमार्फत पनि वितरण गरिए । ठूला शहरहरूमा तिनीहरूलाई गल्लीहरूमा छरिए अथवा बाल्कोनीबाट तल नाचघरहरूमा छरिए । स्थानीय स्तरमा तिनीहरूलाई राती अवेरा र विहानै कारखानाका चोकचोकहरू र पानी थाप्ने ठाउँहरूमा जहाँ तिनलाई मानिसले विहानै देख्न सक्दथे, राखियो । प्रत्येक यस्ता अपरेशनपछि जसलाई सोयिंग( कयधष्लन) भन्ने गरिनथ्यो, एउटा निस्चित चिन्ह नजिकका पर्खालमा लगाउने गरिन्थ्यो ताकि रातीको कामको असर, प्रभावको पुरा प्रतिवेदन विहानमा पाउन सकिन्थ्यो । ससाना नगरहरू र गाउँहरूमा, इष्क्रा पर्चाहरूलाई बजारका दिनहरूमा किसानका हलोहरू र पर्खालहरूमा टाँसिएको हुन्थे । यो सबै खतरापूर्ण काम थियो किनभने पत्ता लाग्दा वित्तिकै गिरफ्तार गर्ने र साइवेरियाका लागि निर्वाशनको सम्भावना थियो । यो काममा संलग्न कमरेडहरूले सुस्त–सुस्त लेनिनको सर्वहारा पार्टी निर्माणको योजना मुताविक त्यसको आधारमा प्रोफेशनल क्रान्तिकारीहरूको टिम निर्माण गर्न सुरू गरे ।
पार्टीको संरचना र वनावटलाई, लेनिनले विचार गरे कि यसका दुई भागहरूः एउटा नेतृत्वदायी पार्टि कार्यकर्ताहरूको नियमित क्याडरहरूको एउटा नजिकको सर्कल । खासत प्रोफेशनल क्रान्तिकारीहरू, त्यो भनेको, पार्टी काम देखि वाहेक अन्य सबै पेशाहरूबाट स्वतन्त्र र कम्तिमा पनि न्यूनतम सैद्धान्तिक ज्ञान भएका, राजनीतिक अनुभव भएका, संगठनात्मक व्यावहार भएका र जारशाही पुलिससित लडने र सामना गर्ने कला भएका पार्टी कार्यकर्ताहरू । दोस्रो स्थानीय पार्टी संगठनहरूको एउटा चौतर्फि सञ्जाल भएको र मजदुर जनताको सयौ–हजारौको समर्थन भएको । जब यस्तो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया इष्क्राको मद्तमार्फत अगाडि बढिरहेको थियो, लेनिनले उनका लेखहरू र किताबहरूमार्फत यो प्रक्रियालाई दिशा निर्देसन गरे । खासगरी महत्व कहाँबाट सुरू गर्ने ? के गर्ने ? र संगठनात्मक प्रश्नहरूमाथि कमरेडलाई चीठी थिए । यी कामहरूमा उनले सर्वहाराको वैचारिक र संगठनात्मक आधार बसाल्ने काम गरे ।
संगठनात्मक प्रश्नहरू बाहेक लेनिले गरेको एउटा प्रमुख लडाई अर्थशास्त्रीहरू, जसले मजदुरहरूको आर्थिक संघर्षलाई मात्रै काम गर्ने सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टी बन्देज गर्न चाहन्थे, तिनका विरूद्ध थियो । तिनीहरू रसियामा लेनिनको निर्वासनको दौरानमा शक्तिमा बढेका थिए र लेनिनले महसुस गरे कि पार्टी कंग्रेस सुरूभन्दा पहिले आर्थिकवादलाई वैचारिक रूपले पराजित गरिनु पर्दछ । उनले तिनीहरूमाथि सिधै आक्रमण सुरू गरे । खासगरी उनको के गरिनु पर्दछ ? भन्ने किताब मार्फत लेनिनले प्रदाफास गरे कि कसरी अर्थशास्त्रीहरूका विचारहरूको अर्थ मजदुर वर्गका निरन्तरतालाई नमस्कार गर्ने गर्दछन् र पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका र सचेतताको भूमिकालाई इन्कार गर्ने गर्दछन् । उनले देखाए कसरी पुँजीवादलाई मजदुर वर्गको दासता तर्फ यसले लैजाने गर्दछ । जब माक्र्सवाद प्रशिक्षीत गरिरहदा, अर्थशास्त्रिहरूले सामाजिक सुधारको एउटा पार्टीभित्र क्रान्तिकारी पार्टीलाई बदल्न चाहन्थे । लेनिनले यसरी देखाए कसरी अर्थशास्त्रिहरू बर्नस्टिन शंसोधनवादका अवसरवादी प्रवृतिका रसियन प्रतिनिधि थिए । लेनिनको किताब, रसियामा व्यापक वितरण गरिएको थियो, अर्थवादलाई कडारूपले पराजित गर्न सफल भयो । यसले यसप्रकार सिद्धान्तहरूलाई स्थापित ग¥यो जुन पछि गएर बोल्सेविक पार्टीको वैचारिक जग बन्यो ।
कंग्रेसपछि लगत्तै मेन्सेविकहरूले तोडमरोडहरू र विभाजनका कृयाकलापहरू सुरू गरे । यसले प्रसस्त भ्रमहरू सृजना ग¥यो । भ्रमहरूलाई स्पष्ट पार्नका लागि, लेनिनले, मे १९०४मा उनको प्रशिद्ध किताब, एक पाइला अगाडि, दुई पाइलाहरू पछाडि प्रकाशित गरे । यसले दुवै कंग्रेसको दौरान र कंग्रेसपछि अन्तर–पार्टी संघर्षको एउटा विस्तृत विश्लेषण दियो र त्यो आधारमा सर्वहारा पार्टीको प्रमुख संगठनात्मक सिद्धान्तहरू, जुन पछि बोल्सेविक पार्टीको संगठनात्मक जगहरू बन्यो । यो किताबको सर्कुलेसनले पार्टीको स्थानीय संगठनहरूको बहुमत बोल्सेविकहरूको पक्षमा ल्यायो । यद्धपि केन्द्रीय संस्थाहरू, पार्टीको मुखपत्र र केन्द्रीय समिति मेन्सेविकहरूको हातमा गयो जो कंग्रेसका निर्णयहरूलाइ हराउन ह्दयदेखिनै प्रतिवद्ध थिए । बोल्सेविकहरूलाई यसरी उनीहरूको आफ्नै समिति गठन गर्न र उनीहरूको आफ्नै मुखपत्रका लागि वाध्य पारियो । दुवै समूहहरूले उनीहरूका आफ्ना कंग्रेस र कन्फरेन्स आयोजनाका लागि वेग्ला वग्लै तैयारीहरू गर्न सुरू गरे । यी १९०५मा आयोजना गरिए । पार्टीमा विभाजन पुरा भयो । जगहरू यद्धपि सही अर्थमा क्रान्तिकारी पार्टी जो एउटा नयाँ प्रकारको सर्वहारा पार्टीको निर्माणका लागि जग बसाली सकिएको थियो ।